China Triaryl Isopropylated Phosphate mpanamboatra sy mpamatsy | Fortune
Triaryl Isopropylated Phosphate, IPPP35 dia ranon-javatra mangarahara misy fofona manitra kely, viscosity 78-85 (20 ° C), teboka tselatra 220 ° C, teboka mangotraka 235-255 ° C (4 mmHg), index bias 1.553-1.556 (25 ° C), mety levona amin'ny benzène, toaka, kilasy etera.
Izy io dia plastika mihazakazaka mirehitra miaraka amin'ny fahamendrehana hydrolytic tena tsara, menaka tsara ary insulation elektrika, fanoherana mitafy ambony ary fananana miady amin'ny bakteria. Ampiasaina indrindra amin'ny PVC, polyethylene, hoditra artifisialy, sarimihetsika, ary ravina. , ravina, fehikibo conveyor, materialy gorodona, tariby sy tariby, ary résin synthetic, plasticizer vita amin'ny rubber sy cellulose, retardant flame; azo ampiasaina ho toy ny mpandraharaha fanaraha-maso ny lasantsy lasantsy, menaka manosotra faneriterena mahery vaika anti-akanjo mpiasan'ny sy ny synthetic lelafo retardant menaka hydraulic solika.
Fisehoana: ranon-javatra mangarahara tsy misy loko na mavo
Ny hery misintona (20 ° C): 1.183
Votoatin'ny phosforus (P%): 8.6
Sanda asidra (mgKOH / g): 0,1
Chromatika (APHA): ≤50
Triaryl Isopropylated Phosphate dia atolotra ho toy ny flame retardant ho an'ny PVC, polyethylene, leatheroid, film, tariby, tariby elektrika, polyurethanes malefaka, resina cellulosika ary fingotra sentetika. Izy io koa dia ampiasaina ho toy ny fanampiana fanodinana lelafo ho an'ny resina injeniera, toy ny fifangaroan'ny PPO, ny polycarbonate ary ny polycarbonate. Izy io dia manana fahombiazana tsara amin'ny fanoherana ny solika, ny fitokana-monina elektrika ary ny fanoherana ny holatra.
Ity akora ity dia ampiasaina ihany koa amin'ireto vokatra manaraka ireto: lubricants sy menaka, vokatra firakotra, polymère, adhesives sy sealants, zava-mahadomelina photochemical ary fluide hydraulic. Ity akora ity dia azo alefa amin'ny tontolo iainana avy amin'ny fampiasana indostrialy: ny fangaro mifangaro, ny forona famoronana, ary ny endrika famokarana lahatsoratra.
Ny Triaryl Isopropylated Phosphate dia amboarina sy / na ampidirina ao amin'ny faritra ara-toekarena eropeana amin'ny 1 000 - 10 000 taonina isan-taona.
Ity akora ity dia ampiasain'ny mpanjifa, amin'ny lahatsoratra, ataon'ny mpiasa matihanina (fampiasana betsaka), amin'ny famolavolana na fanangonana indray, amin'ny tranokala indostrialy, ary amin'ny famokarana.
Manome fakan-kevitra momba ny vidin'ny phosfat triaryl isan'ny triaryl, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, ao anatin'ireo mpanamboatra phosphate isopropylated triaryl isopropylated tsara indrindra any Shina, no miandry anao hividy ambiny ippp 65, reofos 65 mandrafitra ny orinasa ao aminy.
1．Synonyms: IPPP, Triaryl phosphates Joshuapropylated, Kronitex 100, Reofos 65, Triaryl phosphates2. Milanja molekular: 3903. CAS NO .: 68937-41-74．Formula: C18H15 R3O4P5．Famaritana: fisehoana: ranon-javatra mangarahara mavo tsy misy taratra Gravity specific (20/20 ℃): 1.15-1.19 Sanda Acid (mgKOH / g): 0.2 maxColor Index (APHA Pt-Co): 80 maxRefractive index: 1.550- 1.556Viscosity @ 25 ℃, cps: 64-75Phosforus Atiny%: 8.0min6. Fonosana: harona amponga 230kg / vy, 1150KG / IB CONTAINER, 20-23MTS / ISOTANK. Entana mampidi-doza io vokatra io: UN3082, CLASS 9
Ny fiarahana amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny vidin'ny phosfat triaryl, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, anisan'ireo mpanamboatra sy mpamatsy fôtôly phôtôlôzy triaryl be mpangataka ao Shina, dia miandry anao hividy fôtôfôly isopropylated triaryl be indrindra no mamorona ny orinasa ao aminy.